Ny fanavaozana vaovao ho an'ny KaOS 2018.08 dia efa misy | Avy amin'ny Linux
Ny fanavaozana vaovao ho an'ny KaOS 2018.08 dia efa misy izao
Andro vitsy lasa izay Navoaka ny mpamorona fizarana Linux KaOS tamin'ny alàlan'ny fanambarana iray tao amin'ny tranonkala ofisialin'ny tetikasa, ny famoahana vaovao farany ho an'ny KaOS, tonga amin'ity fanavaozana vaovao ity amin'ny KaOS 2018.08
Amin'ity fanavaozana vaovao ny fizarana ity fanavaozana maro no voarain'ireo fonosana sy programa mamorona ny fizarana Linux.
1 Momba ny fizarana Linux KaOS
2 Momba ny fanavaozana KaOS 2018.08 vaovao
3 Sintomy ary apetraho KaOS 2018.08
Momba ny fizarana Linux KaOS
Ho an'ireo mpifidy izay mbola tsy mahalala ny fizarana dia azoko lazaina aminao izany fizarana Linux irery ity, mifantoka manokana amin'ny tetikasa KDE, zavatra mitovy amin'ny an'ny KDE Neon (fizarana miorina amin'ny Ubuntu).
aza KaOS dia fizarana namboarina avy tany am-boalohany miaraka amin'ireo tahiry ao aminy.
Amin'ny maha distro azy manokana dia mampiasa tontolon'ny birao KDE Plasma izy. Ho fampisehoana tsara kokoa, ampiasaina ny tranomboky Qt, izay tsy mifanaraka amin'ny hafa amin'ny karazany.
Nahazo aingam-panahy avy amin'ny Arch Linux, saingy nanamboatra ny fonosany manokana ireo mpamorona, izay misy ao amin'ny toerana anaovany azy ireo. KaOS dia mampiasa modely amin'ny famoahana famoahana tsy tapaka ary namboarina manokana ho an'ny solosaina 64-bit.
Momba ny fanavaozana KaOS 2018.08 vaovao
Amin'ity fanavaozana vaovao ny fizarana Linux ity KaOS 2018.08 tsy misy fiovana lehibetsara amin'ny ankapobeny Natomboka ity fanavaozana vaovao ity satria efa mihoatra ny 70% amin'ireo fonosana mandrafitra ny rafitra no efa nanana fanavaozana azo alaina.
Araka ny tokony ho fantatrao, ny KDE dia namoaka fanavaozana nandritra ny volana aogositra, izany ny sary KaOS vaovao dia ho hitanao ny kinova farany miorina amin'ny tontolo Desktop Desktop KDE miaraka amin'ny fampiharana KDE Frameworks 5.49.0, Plasma 5.13.4, ary KDE 18.08.0. Natsangana tamin'ny Qt 5.11.1 rehetra.
Amin'ireo fanavaozam-baovao izay tafiditra ao anatin'ity fanavaozana vaovao ny fizarana ireo rindranasa isan-karazany azontsika asongadina ity: KDE Applications 18.08, ny menio ny tontolon'ny fifanakalozan-kevitra Dolphin dia nohavaozina ho "Setting", Gwenview Aprime fanitsiana feno, KMail nanampy fanampiana amin'ny dia mandeha sy ny fampisehoana izao dia vera manandratra manampy anao hanoritra mahitsizoro
Ao amin'ny kinova vaovao, Namboarina ny Wales Welcome Panel hanampiana amin'ny fananganana fotodrafitrasa vaovao.
Voasoratra amin'ny QML izy io ary misy ny fiasa toa ny fanaingoana ny rindrina, ny fampahalalana momba ny fisie, ny vaovao.
Ny lohahevitra Midna 2018 dia nohavaozina tanteraka ary ankoatr'izay, maherin'ny 2500 ny sary masina vaovao nampiana ampiasaina ary nosoratana indray ny lohahevitra fidirana sddm.
Ary ny zava-dehibe indrindra azontsika asongadina momba ny rafitra sy ny fanavaozana azy ireo kinova vaovao an'ny mpizara sary Xorg 1.20.1, ny Linux kernel 4.17.17, ny kinova 5.1.1 an'ny Pacman package manager, Wayland 1.16.0, GStreamer 1.14.2, LLVM 6.0.1, systemd 239, Mesa 18.1.7, NetworkManager 1.12.2, Rust 1.26.0, Protobuf 3.6.1, Intel-ucode 20180807, Openjdk 8u171 ary Ruby 2.5.1 .
Zava-dehibe ihany koa ny fahafantarana fa ny repositories Kaos dia tsy manolotra Qt 4. Ny rindranasa rehetra izay tsy nivadika ho Qt 5 dia tsy azo ekena intsony amin'ny Kaos.
Ity ISO ity dia mampiasa ny rafi-drakitra XFS CRC ary ny finobt dia avela ho lasa default. CRC dia mamela ny fitadiavana lesoka noho ny olan'ny fitaovana. Kaos dia mampiasa Systemd - Systemd-boot ho an'ny fametrahana UEFI.
Ary farany amin'ny olana fantatra amin'ity fanavaozana vaovao ity dia afaka mahita izany isika Amin'izao fotoana izao dia tsy azo atao ny mametraka ny layout ao RAID.
Sintomy ary apetraho KaOS 2018.08
Raha te hanandrana an'ity kinova vaovao an'ny rafitra ity ianao hizaha toetra azy amin'ny milina virtoaly na apetrakao amin'ny solo-sainanao aza dia afaka mankany amin'ny tranonkala ofisialin'ny tetikasa ianao ary ao amin'ny fizarana fampidinana anao dia azonao atao ny mahazo ny sarin'ity kinova vaovao ity, ny rohy dia ity.
Ny sary fizarana dia azo soratana miaraka amin'i Etcher amin'ny fitaovana USB.
Raha efa mpampiasa ny fizarana izy ireo dia afaka manatanteraka fanavaozana tanteraka amin'ny alàlan'ny fanoratana:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Ny fanavaozana vaovao ho an'ny KaOS 2018.08 dia efa misy izao
Mampiasa azy aho, tsara izany satria tsy manova distro aho hatramin'ny nametrahako azy voalohany tamin'ny solosaiko
Fa maninona no nivoaka ny sarin'ny vehivavy antitra iray?
Ny tontolon'ny birao KDE dia nahazo fanatsarana tamin'ny fampidirana an'i Samba
Linux Kernel 4.17 mahatratra ny faran'ny fiainana, ny mpampiasa dia asaina manavao ny Linux 4.18